२४ वर्षसम्म एउटै कोठा’मा एक पुरुष’लाई ब’न्ध’क ब’नाएर यौ’न शो’ष’ण’स’हित च’रम या’तना – AB Sansar
April 8, 2021 April 8, 2021 santoshLeaveaComment on २४ वर्षसम्म एउटै कोठा’मा एक पुरुष’लाई ब’न्ध’क ब’नाएर यौ’न शो’ष’ण’स’हित च’रम या’तना
परिचय सोध्दा उनले आफ्नो नामसमेत अनकनाएर भन्न सके । आमाबुबाको नाम र ठेगाना उनले बिर्सिसकेका छन् ।उनले आफ्नो गाउँको ठेगानाबारे सानोमा सुनेको बताउँदै भने, खोटाङको चिसापानी गाविस हो भन्ने सुनेको,थिएँ?’
सुन्दा कुनै क’हालीलाग्दो चलचित्रको कथाजस्तो जीवन आफूले भो’गे’को ती व्यक्ति बताउँछन् । उनका खुट्टा’मा चु’रो’टले डा’मे’का दा’ग’हरु छ’न् । पेटमा तलदेखि छा’ति’सम्म चि’रि’एको दा’ग दे’ख्न स’किन्छ ।करिब ९ वर्षको उमेरमा खोटाङबाट आमाबुवासहित काठमाडौंको सानेपा पुगेका विज्ञान एकदिन केही सामान किन्न गल्लीमा निस्केका बेला उनको अघि एक कालो गाडी आएर रोकियो । उक्त गाडीबाट तीनजना मानिसहरु निस्किए ।अचानक उनी’माथि कम्बलले ढाकियो र गाडीभित्र कोचियो ।
उनलाई सानो हुँदा कहिलेकाहीँ चिया र खाना बनाउन लगाउँथे । ठूलो भैसकेपछि उन’को ल’गा’ता’र यौ’ न शो’ष’ण मा’त्रै भ’इ’रह्यो ।२४ वर्षमा उनले य’ति या’त’ना पा’ए कि अहिले कोही महिला दे’ख्यो कि ड’र ला’ग्ने गरे’को बताउँछन् । कोही मान्छेको पनि विश्वास लाग्न छोडिसक्यो,’उनले भने ।
विगत २४ वर्षमा उनकोस’र्वस्व लु’टि’यो । यतिसम्म कि उनले आफ्नै आमाबुवाको नामसमेत याद राख्न सकेनन् । साथीसँगी कसैको नाम उनलाई याद छैन । धेरै बेर सम्झिने कोसिस गरेर उनले भने, त्यतिबेला एउटी बहिनी थिई । उसको नाम तुलसी हो की यस्तै थियो ।’उनीसँग हाल बचेको चिज भनेको मात्र उनको नाम मात्र हो । कहिलेकाहीँ त यही नाम पनि बिर्सिंन्छु कि भन्ने डर लागिरहन्छ । कहिलेकाहीँ आफैलाई चिन्दिनं कि भन्ने डर लाग्छ,’ लामो सुस्केरा तान्दै उनले भने ।
२४ वर्ष’सम्म विज्ञान’को शो’ष’ण भ’यो । करिब चार वर्षअघि उन:को पे’ट’समेत चि’रि’यो । किन चि’रि’यो ? उनी भन्न सक्दैनन् । आजभोली अलिकति खाना बढी भयो, पानी बढी भयो भने घाँ’टी’मा सि’न्का हान्छ । पि’सा’ब फे’र्न गा’ह्रो हु’न्छ । चिया पिउन भने तलतल लागिरहन्छ,’ विज्ञान भन्छन् ।पेट चि’रि’ए’को घा’उ नि’को हु’न एक वर्ष लागेको उनी बताउँछन् । डा’क्टरहरु पनि घरमै आउँथे । अर्कै भाषा बोल्थे । सब चिज घरभित्रै हुन्थ्यो,’ उनले हातमा बनाइएको ट्याटु देखाउँदै भने, यो पनि उनीहरुले आफै बनाइदिएका हुन् । मैले उनीहरुलाई मेरो नाम कहिल्यै भनिनं । त्यसकारण ट्याटुमा नाम दीपक लेखिदिए ।’
न जाने गन्तव्य न होस्को ठेगान । गले’को शरीर, मतिष्क’मा अ’ने’क त्रा’स, आ’शं’का र अवि’श्वा’स बो’केर शहर’मा दुई घण्टा कता हो कता हिडे । त्यसपछि एउटा ट्रकको पछाडि झुण्डिएर उनी तराईं झरे । ट्रकबाट झर्दा अँध्यारो भइसकेको थियो। कुन ठाउँ हो थाहा भएन । सडकमा रुँदै हिडिरहेको थिएँ । एकजना दाई आएर सोध्नुभयो । सबैकुरा बताएँ । उहाँले मिडियामा जाउ भनेर भन्नुभयो । त्यो दिन पहिलोपटक मिडिया शब्द सुनेको थिएँ,’उनले भने, कहाँ हो ? के हो?मिडिया थाहा थिएन । उहाँले पाँच सय रुपैयाँ भारु दिनुभयो। त्यसैले खाना खाँदै दुईदिन हिँडेर यहाँ आइपुगें,’ विज्ञानले भने ।नेपालगन्जमा पनि उनी करिब तीन दिन यताउता भौतारिए । नेपालगन्ज किन आउनुभयो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, मलाई थाहै छैन म कहाँ आइपुगेको छु । जता गाडी र खुट्टाले डोर्‍यायो त्यतै हिँड्दै आएँ,’ उनले भने, यहाँ आइपुगेपछि आमा बुवाको अनुहार देखिहाल्छु कि भनेर पुरुषका अनुहार हेर्दै हिंडे । आमाको अनुहार देखिहाल्छु कि भनेर महिलाको अनुहार हेर्दै हिंडे । तर भेटिनं,’ उनले भने ।
त्रिदेशीय कप फाइनल हेर्न १ हजार र २ हजारको टिकट
कठै : दिदीको बिहेमा गएकी बहिनीको मृ’त्यु दया छ भने Rip लेख्नुहोस